March 2018 – TPEC
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo shir u qabtay Bulshada Galkacyo [Sawirro]
GALKACYO, Puntland- Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland, ayaa maanta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug shir ugu qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo. Shirkan oo ay kasoo qayb galeen Xunaha Guddiga, maamulka gobolka Mudug, Nabadoono, Cuqaal, Aqoonyahano, Waxgarad, Haween iyo Dhalinyaro, ayaa looga hadlay nidaamka Dimuqraadiyadda Puntland. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland, …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo shir u qabtay Bulshada Galkacyo [Sawirro] Read More »
TPEC iyo Ururrada siyaasadda is-diiwaangaliyay oo kulan yeeshay
GAROWE, Puntland- Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa maanta kulan kula qaatay xafiiskooda xubno matalaya Shanta Urur ee dhawaan is-diiwaangaliyay. Kulankan ayaa ku saabsanaa sidii loo dardargalin lahaa shaqooyinka la xariira dimuqraadiyadda islamarkaana la isaga xog waraysan lahaa howlaha socda. Shirka waxaa furay Guddoomiyaha TPEC, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, wuxuuna warbixin siiyay xubnaha ururrada isagoo tilmaamay in …
TPEC iyo Ururrada siyaasadda is-diiwaangaliyay oo kulan yeeshay Read More »
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay ururrada siyaasadda ee is-diiwaangaliyay [Sawirro]
Guddiga Doorashooyinka KMG ah ee Puntland, ayaa maanta kulan la qaatay ururrada siyaasadda ee dhawaan is-diiwaangaliyay. TPEC, ayaa ururradan kala hadlaysay sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha dhiman iyagoo ku booriyay inay soo buuxiyaan shuruudaha laga rabo ka hor inta aan la gaarin waqtiga kala saarista. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, oo shirka furay …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay ururrada siyaasadda ee is-diiwaangaliyay [Sawirro] Read More »
Madax ka socota UNSOM oo la kulantay Guddiga Doorashooyinka Puntland [Sawirro]
Guddiga Doorashooyinka Puntland, ayaa xafiiskooda magaalada Garoowe, manta ku qaabilay madax ka socotay xafiiska arrimaha siyaasadda ee Qaramada Midoobay ee loo yaqaano UNSOM Wafdigan oo ay hogaaminaysay haweynayda la yiraahdo …. oo arrimaha siyaasadda u qaabilsan UNSOM, waxayna kala hadlayeen guddiga halka ay marayaan shaqooyinka uu u hayo shacabka Puntland. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland, Cabdiraxmaan …
Madax ka socota UNSOM oo la kulantay Guddiga Doorashooyinka Puntland [Sawirro] Read More »
TPEC oo qabatay shirka hirgalinta ururrada Siyaasadda [Sawirro]
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa maanta magaalada Garoowe ku qabtay shir lagu soo bandhigayay wax-qabadka guddiga iyo ururrada is-diiwaangaliyay kuwaasoo gaaraya 5 urur siyaasadeed. Shirkan ayaa lagu casuumay Wasiiro katirsan dowladda gaar ahaan Warfaafinta, Arrimaha Gudaha, Dastuurka, Guddoomiyaasha gobollada, ururrada is-diiwaangaliyay, dhalinyarada iyo bulshada rayidka ah. Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Puntland oo …
TPEC oo qabatay shirka hirgalinta ururrada Siyaasadda [Sawirro] Read More »
TPEC iyo ururrada siyaasadda oo kulan yeeshay [Sawirro]
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland iyo ururrada shanta ah ee iska diiwaangaliyay xarunta dhexe ee guddigu ku leeyahay magaalada Garowe, waxayna kawada hadleen arrimo ku saabsan nidaamka dimuqraadiyadda iyo qaabkii loo dar-dargalin lahaa. Kulanka waxaa shir guddoomiyay Guddoomiyaha Guddiga TPEC, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar iyadoo ay kasoo qaybgaleen xubnaha TPEC iyo mas’uuliyiin matalayay ururrada kala …
TPEC iyo ururrada siyaasadda oo kulan yeeshay [Sawirro] Read More »